Isisombululo se-Samsung sokuya kwindawo yenotshi: ikhamera ephantsi kwescreen | I-Androidsis
Isamsung iya kumilisela i-Galaxy «yonke isikrini» ngaphandle kwenotshi kunye nekhamera yangaphambili phantsi kwescreen
Inotshi inabachasi bayo kunye nabalandeli bayo, kodwa ukuthetha inyani kubonakala ngathi kuyindlela yokunika into entsha kumsebenzisi, ngelixa ungazi ukuba wenzeni ukuziqhelisa kukhuphiswano. Isamsung yenye yezo zigqitha inotshi ngendlela ye-olympically, Ke ngoku siyazi ukuba ulungiselela ukufihla ikhamera phantsi kwescreen.
Njengo inzwa yeminwe kwiscreen esinye, Inkampani yaseKorea inokumangalisa eyayo kunye nabantu abangabaziyo kwakhona ukusuka kuloo mbono ikhutshwe ngu-Essential emva koko yakhutshwa yiApple nge-iPhone X. Ndiyathemba ukuba kunjalo, kuba ndizibonile ezinye zoyilo zenotshi, njengePixelNdiyathemba ukuba bazokwazi ukuyenza.
Ukusuka kwi-SamsungMobile ibango lokuba i-Samsung iya kusebenza kuyo itekhnoloji entsha eya kuthi ifihle ikhamera yangaphambili phantsi kwesikrini. Ngokwazi, inkampani yaseKorea iya kuba nenani leeprototypes ezilungileyo ezi sele zilungile.
Ayaziwa ukuba nini Iselfowuni yokuqala enekhamera efakwe ngaphakathi Kwisikrini. Oko kukuthi, umphambili wonke ungashiyelwa isikrini, ngelixa ikhamera iya "kufihlwa" phantsi kwayo ngaphandle kokuba sikwazi ukuyibona; ubuncinci yile nto siyicingayo.
Ngale ndlela, Isamsung iya kuqhubeka ngeGPS S yayo "yonke isikrini" kwaye iya kuba yeyokuqala apho umlinganiso wesikrini ngaphambili wawuphantse ube yi-100%. Ekuphela kwento enokuba yimfuneko yokwazi ukuba izakushiya phi indawo yezithethi, kwaye ngakumbi xa ngoku zingathi zii stereo ngaphambili, kwaye inokuba yintoni isivamvo sokukhanya kunye nabanye abaninzi.
KUNYE,ukuba yayiyi-Galaxy S10? Khawufane ucinge umzuzwana xa uDJ Koh ephuma neGPS S10 ngenzwa yeminwe ebonakalayo phantsi kwesikrini, kwaye oko ikhamera yangaphambili yayifihliwe phantsi kwayo. Ngokuqinisekileyo ingawaphula onke amacebo kwaye ishiye sivule imilomo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung iya kumilisela i-Galaxy «yonke isikrini» ngaphandle kwenotshi kunye nekhamera yangaphambili phantsi kwescreen
Ifowuni yokusonga kaHuawei iyinyani kwaye iza kufika ngo-2019
Ungayithintela njani ividiyo edlala ngokuzenzekelayo kwi-Twitter